Imidlalo zokufundisa ezasenkulisa ngezandla zabo. Imidlalo izingane, okuzenzela
Izingane ubudala pre-school badinga ukunakekelwa okukhethekile. Kudingeka zizifundele nokuthuthukisa. Lokhu kungaba amageyimu amahle umsizi zokufundisa ezasenkulisa. Izandla ukubenza ngeke kube nobunzima. Ngakho, cabanga konke lokhu kabanzi.
Imidlalo zokufundisa ezasenkulisa ngezandla - inhloso kanye nemigomo
Othisha enkulisa, futhi abazali ekhaya angenza lukhulu izingane zabo. Kubandakanya imidlalo zokufundisa ezasenkulisa ngezandla zabo. Inhloso yabo ukuthuthukisa amakhono lolwazi izingane, nemicabango yabo futhi lokusungula.
Ngaphezu kwalokho, imidlalo zokufundisa ezasenkulisa ngezandla zabo ukusiza ekwakheni amakhono izingane nolwazi ahlukahlukene mayelana nezwe, ukuze bathuthukise ikhono labo njalo futhi ngalokukhomba budlelwane bemicondvo baveze abakucabangayo, yokucebisa silulumagama nokuthuthukisa ukucabanga, inkumbulo, ilukuluku nokuqaphelisisa, futhi endawonye, kanye emihle motor amakhono futhi ukuzwa ethintekayo.
Kuphi uqala? Imidlalo zokufundisa ezasenkulisa ngezandla zabo kungenzeka ukuthi umataniswe, isibonelo, ne ezihlukahlukene yezandla ezithakazelisayo yasekuqaleni. Ake sithi, nge imihlobiso ukuthi izingane angenza bebodwa, usebenzisa tintfo letitinhlobonhlobo: izinkinobho anemibala, amatshe, amashubhu anobude obungalingani, amakepisi kusukela omaka, amagobolondo, Izigaxa, ngokubala izinduku, amakepisi, chips, izintambo futhi izintambo.
Uma ucabangela izinto didactic oluthandwa ingane stringing phezu izintambo zezicathulo ngokwenza namasongo noma imigexo. Lezi imidlalo kuzosiza ingane yakho nokuthuthukisa dexterity namandla uhlangothi, ukubambisana.
Futhi manje, bhekani okwamanje esilandelayo. imidlalo Didactic eqenjini abaphezulu has izici zayo siqu. Ngokwesibonelo, lezi kungaba mnandi ukusebenzisa kakade izinombolo kanye namagama. Tiny ayoyikhetha okunye okubalulekile (izinkinobho, ngokubala izinduku, amagobolondo nokunye. D.). umlingani wakhe izoshayela incwadi noma inombolo. Umdlali wokuqala - wayendlala phezu kwetafula. Lokhu kuzokwenza khona kucinisa lwati yezingane yokukhuluma nokuthuthukiswa zezibalo, amaphuzu ambalwa kanye eziphawula ukuthi okwesingaki, inkumbulo ezibukwayo. Khokha ngokukhethekile imidlalo didactic eqenjini amadala. Lokhu kubaluleke kakhulu.
Okungcono kakhulu, yebo, aphule imidlalo didactic by isihloko. Kwakungeke kuvesane kube kangcono lokhu puzzle.
Ngokwesibonelo, umdlalo. Ingane ifaka into, noma ngohlobo oluthile. Nokho, uyawasebenzisa ulwazi lwakhe emhlabeni nokulandelela. Kulo mdlalo fixed izingane ulwazi imidwebo yejeyomethri kwakhiwa ngokuthola amakhono umehluko nezibonakaliso jikelele lezinto behlukanisa (isayizi, simo, umbala nokunye. D.). Ingane ifunda ukuba baphendule lo mbuzo, "bangaki?", "Kuphi?", "Yini kunjani?" Nokunye. N. Ngamanye amazwi, izingane ukuthuthukisa umsebenzi engqondo kanye ukucabanga okunengqondo.
Izingane kanye amaqembu junior e Gameplay uzophinde kudingeke futhi ukubamba iqhaza abadala. Esikhathini ukuzimela ikusasa lezingane Kusafanele ukuthuthukisa. Yakha imidlalo yayiyindawo ekahle okungokomzwelo, ukunakwa kanzulu, ukuthuthukisa umcabango.
Enye. Izingane kuyodingeka uthanda ezemidlalo umdlalo didactic. iminyaka 4 - kuba yobudala kahle ngoba lowo msebenzi. imidlalo Okufanayo yakha esikoleni izethulo aphansi nolwazi yokuqinisa nokugcina nempilo yabo engozini. Batfutfukisa hhayi kuphela ngokomzimba, kodwa nesokuthi zonke izimfanelo nabanengqondo futhi siqu zengane ngayinye. Izingane sebeqala ukuqonda ukuthi ngokusebenzisa ezemidlalo bayokhula babe nezimo, beshesha, onamandla futhi fast. Yakhelwe le nto imfundiso kubazali nothisha abakhathalela impilo yezingane zabo, kanye izingane abafuna kube amahle eziqinile.
Basuke esetshenziselwa ezihlukahlukene imidlalo namademo lezemidlalo izindikimba (izincwadi zezingane, omagazini, nokunye. D.). Kokuyicabangela, ingane iqala ukuba umbono oluthile lomdlalo.
Ngemva kwalokho, it akhethiwe eziningi izakhiwo ezithile. Okokuqala - ekuseni umzimba, kubanikeze amandla, ngcono isimo semizwa, kunemiphumela ezuzisayo phezu ukuthuthukiswa kanye nokukhula umzimba wengane. Okwesibili - Obonisa nge ibhola, ukuqinisa imisipha emuva, le obliques, imithombo yezindaba, enikeza amandla imilenze nezingalo. Okwesithathu - umzimba for yomgogodla, okuyizinto isihluthulelo ngeqholo efanele. Bavumela yini nje ukuyigcina enhle, kodwa futhi ukuthuthukisa ukuhamba emalungeni yezandla, uqinise emuva imisipha, ngcono kwegazi.
Kunoma ikuphi, imidlalo zezingane zokufundisa kuhluke eziningi "pluses". Ingane entrain ngokuphongoza indaba izithombe. Okubaluleke kakhulu, kungaba ukudlala njengoba ingane ezimbili nokuningi.
Konke kuncike lo mdlalo. Ngokwesibonelo, bangakhetha isithombe abawuthandayo futhi ukutshela omunye ngamunye ngamunye, ukuze kube lubonisa ngubani ngesineke kwenzekani, yini izenzo kuyenziwa, yini kunendaba ukuqhubeka izenzakalo, okuyinto yikuphi okulungile noma okungalungile.
Phela, lo ukukhethwa yesehlakalo izithombe futhi ivame ebuza imibuzo ngokufaneleka ukulondolozwa ezempilo izingane zasenkulisa. Kokuyicabangela, izinyane abakwazi kuphela yokucebisa silulumagama yakho, kodwa usisiza nokuba sibe inkulumo anokuhambisana, ikhono lokwenza lehlukene, futhi-ke, emuva khona kucinisa lwati mayelana nendlela yokuphila enempilo futhi zilungile.
Kodwa ekupheleni umdlalo, izingane kungaba ukudlala izithombe yokuhlukanisa noma ukuqoqa puzzle, okuyinto ihluke nomunye ngosayizi, isithombe, beJiyomethri nobujamo okungasibo beJiyomethri. Ngenxa yalokho, lapho ingane udonsela e yisikhungo esisodwa, uqala ukuthuthukisa ukucabanga okunengqondo, ukunabisa HORIZONS zabo futhi fixed ulwazi, amakhono kanye namakhono. Uma isithombe is eqoqwe, ungakwazi ukunikeza ingane yakho ukwenza umlando yabo, uphendula imibuzo ezithile othisha noma abazali.
Kafushane, imidlalo zokufundisa ezasenkulisa Uyi umsebenzi ewusizo kakhulu. Okubaluleke kakhulu, ilungelo ukuthuthukisa kubo, ukucabanga, ukuhlela. Ukuze wenze lokhu, kudingeka nje zisebenzisa ezihlukahlukene imihlahlandlela bese uxhuma emcabangweni wakho siqu.
Kanjani ukuthuthukisa ingane izinyanga 4. Ukuthuthukiswa ingane izinyanga 4
Izingane ukushaja: imithetho eyisisekelo yokuzijwayeza
Sippy izinkomishi nge straws - kuyini?
Ingabe ingane iye edilini?
Inyanga yokuqala yokuphila
Yekuchumana sendlela ukwenza yokubeka ukupheka in Minecraft.
Ithiphu: ukuthi benzeni le "Maynkraft" uma unesizungu
LMFAO: yini igama duo?
Dicynone - yokusetshenziswa.
Indaba "Imali Maria": isifinyezo
Ukugada Iqhinga uhlu eyabonisa imikhiqizo ngenyanga
Isinkwa Ebalulekile ubhontshisi
"Mercedes S63 AMG 2" (gumbi): Ukucaciswa, incazelo, ukubuyekeza
Udweba kanjani Batman enhle?
Isimo sezulu Arctic: izici, izici ezincwadini zabantu